मोडलिङ्ग पोर्टफोलियो बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस यी ८ सुझाब | ArtistSansar.com
(यो जानकारी आर्टिस्टनेपाल स्टुडियोज एन्ड प्रोडक्सनले तयार पारेको हो। मोडलिङमा पाईला चाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने आर्टिस्टनेपाल तपाईंको पहिलो रोजाइ बन्नसक्छ। आर्टिस्टनेपालको आफ्नै सुबिधा सम्पन्न स्टुडियो छ जहाँबाट पोर्ट्फोलियो तयारी गरी बिभिन्न संचारमाध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्न सहयोग हुनेछ। आर्टिस्टनेपाल आँफैमा ठुलो मिडिया सस्था भएको कारण मोडलिङसँग सम्बन्धित बिभिन्न कामहरु प्राप्तगर्न पनि सहयोग प्राप्त हुनेछ।)
मोडलिङ्ग पछिल्लो पुस्ताको रोजाईको बिषय हो। धेरै युवापुस्ताहरु मोडलिङ्गमा भबिष्य खोज्ने सपना देख्दैछन। तर मोडलिङ्ग के हो ? पोर्टफोलियो के हो ? मोडलिङ्गमा कसरि काम गर्न सकिन्छ यी बिबिध बिषयमा भने अनभिज्ञ छन्। आउनुहोस हामी यहा मोडल बन्नको पहिलो चरण पोर्टफोलियो फोटोसुटको बारेमा केहि जानकारी दिनेछौ।
एउटा सफल मोडल बन्नको लागि पहिलो चरण भनेको तपाईंको मोडलिङ्ग पोर्टफोलियो हो। एक महत्वाकांक्षी मोडेलको रूपमा, सुरुमा तपाईंलाई आफ्नो क्यारियर किकस्टार्ट गर्न एक अद्भुत मोडेलिंग पोर्टफोलियो आवश्यक पर्दछ। पोर्टफोलियो भनेको फोटोसुटको एउटा प्रकार हो जसले तपाईंको मोडलिङ्ग बायोडाटाको काम गर्दछ। रोजगारी प्राप्तिको लागि जसरि बायोडाटा, शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेको जस्तै एउटा मोडलको रुपमा अवसर प्राप्त गर्नको लागि यसैले तपाइँको एजेन्सी र ग्राहकहरुमा एक उत्तम पहिलो छाप बनाउनको लागी सहयोग गर्दछ।अर्थात एजेन्सी वा ग्राहकले तपाईंलाई एउटा कामका लागि विचार गर्न सहयोग गर्दछ। यो केवल फोटोहरूको संग्रह मात्र होइन, तपाईको प्रतिभा र क्षमताको प्रदर्शन र मोडेलको रूपमा चिनाउन पनि यसले ठुलो भूमिका खेल्दछ।
सुझाव 1: तपाई बन्न चाहानु भएको मोडेलको प्रकारमा ध्यान दिनुहोस्
मोडलिङ्गका धेरै प्रकार छन् , तसर्थ मोडलिङ्गमा आउनु पूर्व एक सफल मोडल बन्नको लागि तपाई मोडलिङ्गको लागि कत्तिको सक्षम छु त्यो निर्धारण गर्नुहोस। आफ्नो क्षमताको पहिचान गर्नुहोस र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाई कस्तो प्रकारको मोडलिङ्गको लागि उत्साहित हुनुहुन्छ? निर्धारण गर्नुहोस। ग्राहकहरू आफ्नो व्यावसायिक प्रमोसनको लागि मोडेलहरुमा बिबिधता खोज्दछन् र यसको परिणाम स्वरूपका फोटोहरु जुन तपाईंले आफ्नो मोडलिङ्ग पोर्टफोलियोमा समावेश गर्न सक्नुभयो भने तपाईंले चाहानुभएको मोडेलिंगको प्रकार प्रतिबिम्बित हुन्छ। यो प्रारम्भिक निर्दिष्ट गरेर धेरै समय र लागत बचत गर्न सकिन्छ।
सुझाव 2: सहि फोटोग्राफर छनौट गर्नुहोस।
यदि तपाईले मोडलिङ्ग म्यानेजमेन्ट कम्पनि संग साइन अप गर्नुभयो भने, पोर्टफोलियो मेकिङ्गमा तपाईलाई सहजता हुनसक्छ। तपाईलाई प्रोफेसनल मेकअप मा प्रोफेसनल फोटोग्राफरको ब्यबस्था एजेन्सीले गर्न सक्छ। यदि तपाई कुनै एजेन्सीमा आबद्द नभएर मोडलिङ्गमा काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने ब्याबशायिक फोटोग्राफर चयन गर्नुहोस। र तपाईले फोटोसुट गर्न चाहेको फोटोको विवरण बताउनुहोस। काम गर्नु अघि यस अघि गरेको कामको बिररण हर्नुहोस, फोटो डेलिभरी समय बुझ्नुहोस् , फोतोसुट शुल्कमा निश्चित हुनुहोस कि उहासंग काम गरेर तपाइँले समय, पैसा र अनाबश्यक झमेला व्यहोर्नु नपरोस।
सुझाव 3: प्रोफेसनल हेयर मेक-अप आर्टिस्ट छनौट गर्नुहोस
पोर्टफोलियो शूटको लागि एक प्रोफेसनल हेयर एण्ड मेकअप आर्टिस्ट को जरुरि पर्दछ। पोर्टफोलियो निर्माणमा तपाइँलाई आफ्नो कपालको सही स्टाइलिंग र मेक-अपको साथ अझ राम्रो देखाउँदछ। याद गर्नुहोस्, तपाईको मोडेल पोर्टफोलियो तपाईको ठूलो कदम हो र यसलाई उत्तम समयमा अनगिन्ति अवसर प्राप्त गर्नका लागि सहयोग हुनेछ। तपाई आफैमा पनि मेकअपको बारे बुझ्नु राम्रो हुन्छ, यदि तपाई आफै मेकअपको ज्ञाता हुनुहुन्छ भने फोतोसुटमा आफ्नै मेकअप किट प्रयोग गर्न नि सक्नुहुनेछ।
सुझाव 4:तपाईलाई चाहिने फोटोहरूको प्रकारको बारेमा निर्णय गर्नुहोस
तपाईंले आफ्नो मोडेल पोर्टफोलियो शुटबाट कस्तो प्रकारको फोटो चाहनुभएको हो ? पहिला निर्णय गर्नुहोस । तपाईलाई राम्रो पोर्टफोलियोको लागि चाहिने फोटोहरूका विशेष विवरणहरू बिबरणहरु बनाउनुहोस। मोडेलिंगका प्रकारहरूको बारे बुझ्नुभयो भने तपाईंलाई सजिलो हुन्छ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले उत्कृष्ट, क्लोज-अपहरू, र पूर्ण बडी शटहरू प्राप्त र आफुलाई बहुमुखी प्रतिभा देखाउन फोटोको भूमिका महत्पूर्ण रहन्छ। तसर्थ त्यहि अनुसारका कपडा छनौट गर्नुहोस र फोटोग्राफर संग आबश्याक सल्लाह लिनुहोस्। आश्चर्यजनक मोडेल पोर्टफोलियो तयार बनाउनुहोस।
सुझाव5: हेडशट समावेश गर्नुहोस्
अर्को आवश्यक पोर्टफोलियो थप एक हेडशट हो जुन तपाईंको अनुहार र अनुहारका विभिन्न एङ्गल तथा एक्सप्रेसनहरुमा लिईएकोहुन्छ । यसमा प्राकृतिक मेकअप हुनुपर्छ र साधारण कपडा लगाउनुपर्छ। यसमा कुनै प्याट्रन तथा आर्ट मेकअप प्रयोग नगर्नुहोस। यो फोटोहरु एजेन्सीहरू र ग्राहकहरूलाई तपाईंको प्राकृतिक सुन्दरता देखाउन डिजाइन गरिएको हो। तर केहि हेडसुटहरु क्रियटिभ मेकअप, लाईटिङ्गमा पनि प्रयाश गर्न सक्नुहुनेछ।
सुझाव6: भर्सटाईल बन्नुहोस्
तपाईंको पोर्टफोलियोमा फोटोहरुले तपाइलाई एक बहुमुखी प्रतिभाको मोडेलको रूपमा चित्रण गर्नुपर्दछ। यसको लागि विभिन्न डिजाईनका वार्डड्रब विभिन्न प्रकारका पोजहरू र मेकअपहरु महत्त्वपूर्ण हुन्छन ! कसरि तपाइलाई कुन साईडबाट सबै भन्दा राम्रो देखिन्छ ? त्यो निर्धारण गर्नुहोस र तपाईंको पोर्टफोलियोमा आकर्षक पोजहरू प्रदर्शन गर्नुहोस्। केहि फोटोहरु ब्ल्याक एण्ड व्हाईटमा पनि सम्पादन गर्न लगाउनुहोस। पोजको बारेमा अर्को पटक उल्लेख गर्नेछौ। तपाई ईन्टरनेटको माध्यमबाट पोज सम्बन्धि जानकारी लिन सक्नुहुनेछ।
यसरि फोटोको माध्यमबाट तपाईले आफुलाई बहुमुखी प्रतिभा प्रमाणित गर्न सक्नुभयो भने मोडलको रुपमा रोजगार प्राप्त गर्न तथा एजेन्सीहरुले मोडलको रुपमा बुक गर्न को लागी तपाइँको संभावनाहरु लाई मजबूत गर्दछ।
सुझाव 7: फोतोसुटमा तपाईको फिगर शो गर्नुहोस्
यदि तपाइँ कमर्सियल वा प्रिन्ट मोडेलको रुपमा प्रस्तुत हुन खोज्दै हुनुहुन्छ भने, स्विमिङ्ग कस्टम तथा बिकिनीमा पोर्टफोलियोमा समावेश गर्न सके राम्रो हुनसक्छ। यदि तपाई आफैमा कम्फ़र्ट हुनुहुन्न भने आफुलाई सहज हुने पोशाकहरु प्रयोग गर्नुहोस। नेपाली मोडलिङ्ग पोर्टफोलियोमा ग्ल्यामर फोतोसुट कम्पोल्सरी भन्ने छै हुदैन।
सुझाव 8:अनलाइन मोडेलिंग पोर्टफोलियो वेबसाइट सिर्जना गर्नुहोस्
यदि तपाई मोडलिङ्गको लागि फेस टु फेस मिटिंग गर्दै हुनुहुन्छ भने मात्र प्रिन्ट फोटो पोर्टफोलियो जरुरत पर्नसक्छ। डिजिटलको समय हो यो। धेरै अवसरबारे जानकारीहरु अनालईनकै माध्यमबाट जानकारी पाईनेहुनाले पोर्टफोलियो वेबसाईट बनाउनुहोस। जहा तपाईका उत्कृस्ट फोटोहरु पोस्ट गर्नुहोस। साथमा तपाइँको सबै विवरणहरु उचाई, तौल, नाप, उमेर , कपालको रंग, आँखा र color र तपाईको क्षमता , अनुभव पनि प्रोफ़ाईलमा उल्लेख गर्नुहोस ।सोसियल मिडियामा पेजहरु पनि बनाउनुहोस, अनलाईन एजेन्सीहरुमा आबद्द हुनुहोस।
नेपालमा निशुल्क मोडलिङ्ग पेज artistnepal.com मा सृजना गर्न सकिन्छ। प्रयाश गर्नुहोस।
आर्टिस्ट नेपाल मिडिया नेटवर्कका लागि नव ढुंगेलद्वारा सम्पादित
नव ढुंगेल एक निर्देशक, फेशन ट्रेनर , संगीत अन्वेषक तथा फोटोग्राफर हुन् )
मोडलिङ्गमा भबिष्य खोज्दै हुनुहुन्छ ? निम्न कुराहरु अपनाउनुहोस